I-Mini handheld inductor heater-handheld ductor heater-Magnetic Inductor
Ikhaya / I-Heater Induction Heater / i-mini ductor induction heater / Mini inductor ephathwayo ngesandla
iindidi: I-Heater Induction Heater, Ukukhupha iifutha, Ukufudumeza i-boiler, i-mini ductor induction heater tags: iductor, Ukuphathwa ngesandla kwe-ductor induction heater, Ukuphathwa ngesandla kwe-ductor, ductor mini, i-mini ductor induction heater, i-mini handheld inductor, i-mini ephathwayo ye-inductor heater, I-Mini induction ye-heater yeemoto, I-Mini induction derusty heater, i-mini induction heater, I-Mini induction engafakwanga i-remover, i-mini inductor heater, ductor omazibuthe mini, ductor encinci
Isixhobo esincinci se-inductor heater-handheld ductor heater-Magnetic Inductor isixhobo esikhutshiweyo kunye nesisiqwengile iitawuli, iibheringi kunye nezikhonkwane kwimoto, iilori, ezolimo, ukulungiswa kwesikhephe.
I-Mini handheld inductor heater-handheld ductor heater-Magnetic Inductor. I-KIA-1000W isebenzisa amandla kazibuthe lokutshisa Itekhnoloji yokutshisa ukunyanga iinxalenye ezincinci ezimotweni, oomatshini, iinxalenye ezahlukeneyo zesinyithi kunye nepolyethylene. Isetyenziselwa ukutshisa iibhulukhwe ezahlukeneyo zeemoto, iikati, iiglasi, Iipulleys, iipleys, iibheringi, izinzwa, njl njl. Akukho mlilo uvulekileyo, akukho mfuneko yokuphepha izinto ezinokutsha ezinje ngeplastikhi; Akukho kupholisa kwamanzi, ukusebenza ngokukhuselekileyo, ukusetyenziswa okulula kwaye kulula ukuthwala.
Ukushisa okuzinzileyo, kulula ukuyisebenzisa ngaphandle nangaphandle ngaphakathi. Akukho ukutshisa, ukukhusela ezinye izinto, ukuphucula ukusebenza kakuhle. Ayonakalisi iinxalenye ezikufudumeza. Ayizukulimaza iindawo ezijikelezileyo ngokusebenzisa irabha okanye ipulasitiki. Akukho dangatye elivulekileyo. Umgaqo: Ukusetyenziswa kwentsimbi kunye nokushushubeza okungenazintsimbi kwindawo ye-electromagnetic kungaguqula isikere sibe bubomvu ukutyhulwa kwefowuni kwimizuzwana engama-20. Akukho shushu shushu luvulekileyo ukuqinisekisa ukhuseleko ekusebenzeni kwakho. Izinto zerabha kunye nezixhobo ezinamathelayo nazo zinokufudumeza kwaye zixulwe zixhobo zezixhobo. Umda wokusetyenziswa: isikulufu sokususa iitawuli zombane, isikrufu ukususwa kwezixhobo zombane ezinamandla aphezulu, ukutshintshwa okuqinileyo kwesikrelem, ishenxisi sokushenxisa abaguquli, ukukhutshwa kwesikrefu kwizikhundla ezahlukeneyo, ukususwa kwemivimbo ye-vinyl ngaphandle kokunyibilika okanye irabha, ukususwa kweehoses kunye nendlela ye-AC. , Ukushisa kunye nokwandisa iibheringi Ubuncinci bebhanti lenza ukuba kube lula ukufakela, ukugqwala, kunye nokususwa kwesikrelem, kwaye kungasetyenziselwa ekuqhubekeni kwamashishini ohlukeneyo nezixhobo.
Lo matshini awulungelanga ivenkile yokulungisa iimoto kuphela, ivenkile ye-4S, ivenkile yokulungisa izithuthuthu, ukulungiswa kwemigca yefektri, ulungiso loomatshini, izixhobo zokulungisa izixhobo, isebe lolondolozo lwezinto, isebe lezemali, ivenkile yempahla, kodwa nokulungiselela isixhobo, ukujonga izixhobo ngesixhobo sedayimane. , Ukucoca ubushushu ngamacandelo amancinci, inani elincinci lesinyithi esixabisekileyo (igolide, isilivere, njl. Njl.) Ukunyibilikiswa, inani elincinci lokunyibilikisa isinyithi, njl njl.
Iidiski zobukhulu obahlukeneyo zeebhulukhwe zesithambisi.
Unyango lobushushu lweebhedi zemoto, iitrayi, amagiya, iipali, iipali, iibheringi.
Ukunyangwa kobushushu kwezixhobo zehardware ngomatshini wokucima ifrimu ephezulu, njenge-vise, isando, iipliers, umngxunya.
Ukufudumeza kunye ne-disassembly yemigca eyahlukeneyo yokuvelisa, izixhobo zoomatshini, iinxalenye zezixhobo ezichanekileyo.
Ukuhamba rhoqo kobushushu bokucoca izixhobo zokufudumeza zamandla ezixhobo zamandla ezahlukeneyo.
Ukuwelding kwe-carbide wabona ii-blade ezinamazinyo amakhulu namancinci.
Isakhelo sesilivere, iinxalenye zewelding, isongezo.
Ukudibanisa iiwotshi zee jewelry.
Umzi-mveliso we-Elektroniki: Ucingo oluhle kakhulu, iingcingo zombane ezahlukeneyo, iinxalenye ezifanelekileyo, ukuthengiswa kwesilivere kunye nesilivere.
Umatshini oomatshini kunye nombane: ukudibana kwetsimbi, isinyithi esenziwe ngesinyithi ngesinyithi, ishetshi kunye nokunye ukucima kunye nokubuyisa.
Umzi mveliso wocingo: intambo yentsimbi uhlengahlengiso.
Umzi mveliso wamathoyizi:
Ukwenziwa kweentambo: Iimpuku zamaphepha kunye neziqwengana zezihlangu ziyacinywa.
Izixhobo ezahlukeneyo zokhuni, ezinje nge: izembe, isicwangciso kunye nolunye ubushushu
Izinto ze-Hydraulic ezinje ngeplunger yepompunger, irobhitha yempompo yokujikeleza, ukubuyisela umngxunya kwi-valves ezahlukeneyo, igiya yeempompo zegiya kunye nokunye ukucima okuphezulu.
Ukuphathwa kobushushu koomatshini abahlukeneyo beemoto kunye nezithuthuthu eziphezulu zokucima oomatshini, ezinje nge: crankshaft, intonga yokudibanisa, iphini yephiston, i-camshaft, iveni, amagiya ahlukeneyo kwigiya lebhokisi, iifolokhwe ezahlukeneyo, imipu eyahlukeneyo yokuhamba, ukuhambisa umgama ojikelezayo ophezulu wokuphelisa ubushushu bamashiti, ezahlukeneyo izikhonkwane ezincinci zetyhubhu, iingxondorha ezahlukeneyo, iingxondorha rocker, njl.
Le mveliso inokufudumeza ukuya kuma-800 degrees ngoko nangoko, akukho luvule luvulekileyo lwenziwe, akukho kupholisa kwamanzi kuyafuneka, kwaye ukusebenza kufanelekile.
Ukuba awonakalanga ngabom okanye usebenze ngendlela engafanelekanga, imveliso iqinisekiswa unyaka omnye
Amandla okusebenza Isigaba esinye110v, 50Hz / 60Hz
Isigaba esinye se-220V, 50Hz / 60Hz
Uluhlu lwevolthi yokusebenza 100V-120V
Imveliso yamandla 1KW
Ukuguquguquka kwamaxesha 30-100KHZ
Isiphumo sangoku 10A
Indawo yokukhusela ubushushu 85 ℃
iziQinisekiso CE, UL, CCC, Iyafumaneka kwi-COC, POVC
Isekile yomsebenzi 100%
ubungakanani 380mm * 64mm
Izixhobo ziza ne-Mini Induction heater.
Dia 30mm ikhoyili pieces 2
Dia 40mm ikhoyili pieces 2
Dia 50mm ikhoyili pieces 2
Ubude be-750mm intambo yekhoyili ye-DIY pieces 2
Ikhoyili for Ukufudumeza iipleyiti pieces 2